Gulf Air ayaa dib u bilawday duulimaadyadeedii Baxrayn ilaa Moscow Domodedovo Airport
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Gulf Air ayaa dib u bilawday duulimaadyadeedii Baxrayn ilaa Moscow Domodedovo Airport
Airlines • Airport • Aviation • Wararka Baxrayn • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Markabkii qaranka ee Boqortooyada Baxreyn ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii rakaabka ee jadwalka u ahaa Ruushka.
Duulimaadyada ka imanaya xarunta hawada ee Baxrayn ayaa la shaqayn doonaa toddobaad kasta Sabtida iyo Isniinta.
Sabtida, imaanshaha Domodedovo waa 14:05, bixitaanku waa 14:50.
Isniinta, imaanshaha waa 07:10, bixitaanku waa 08:00.
Laga bilaabo Ogosto 14, 2021, xamuulka qaranka ee Boqortooyada Baxrayn wuxuu dib u bilaabay duulimaadyadii joogtada ahaa ee Madaarka Moscow Domodedovo.
Duulimaadyada ka imanaya xarunta hawada ee Baxrayn ayaa la shaqayn doonaa toddobaad kasta Sabtida iyo Isniinta. Sabtida, imaanshaha Domodedovo waa 14:05, bixitaanku waa 14:50*. Isniinta, imaanshaha waa 07:10, bixitaanku waa 08:00*.
Gulf Air iyo Moscow Gegada diyaaradaha ee Domodedovo waxay wada shaqaynayeen ilaa 2014. Bishii Sebtembar 2017, duullimaadyada ayaa la kordhiyay si ay maalin walba u noqdaan guulaha dariiqa. Bishii Maarj 2019, duullimaadyadii Baxrayn waa la joojiyay sababtoo ah xiritaanka taraafikada hawada ee caalamiga ah sababtuna tahay Covid-19. Tan iyo bilowgii wadashaqayntii ay la lahayd Madaarka Domodedovo, Gulf Air waxay samaysay 2,732 hawlgal oo duullimaad iyo soo degitaan ah waxayna ku qaadday 180,000 oo rakaab ah jidka loo cayimay.
Waddada Baxrayn waxay gaar u tahay xarunta duulista hawada ee Moscow, khadkan hawadu wuxuu bixiyaa meelo badan oo kala duwan oo ah mid ka mid ah shabakadaha waaweyn ee waddooyinka ee Bariga Dhexe.
Gulf Air waa diyaarad dawladu leedahay oo sidda calanka Boqortooyada Baxrayn. Xarunteedu waa Muharraq, diyaaradda waxay ka hawlgashaa duulimaadyo qorshaysan 52 goobood oo ku kala yaal 28 dal oo Afrika, Aasiya, iyo Yurub ah. Xarunteeda ugu weyni waa Madaarka Caalamiga ah ee Baxrayn.
* Waqtiga bixitaanka / imaanshaha waxaa lagu tilmaamay waqtiga Moscow